Mpanamboatra biby volon'ondry - Mpamatsy biby volon'ondry China, mpamokatra
Antony fanolorana anarana Fantatrao ve ny antony mahafatifaty sy marani-tsaina ny saka anao? Satria samy nahita fianarana daholo! Ny zavatra hitanao amin'ny "Asan'ny tanany" anio dia andian-tsarin'ny saka mitovy amin'ny saka anao. Ny asa-tanana dia mampiavaka ny saka rehetra anananao! Avia, mitady mpiara-miasa amin'ny saka!
Volon'ondry nahatsapa firavaka biby mandeha bisikileta
Antony fanolorana torohevitra Tadidinao ve ilay sarimiaina "Zootopia" izay nanaparitaka an'izao tontolo izao tamin'ny 2016? Efa mba noeritreretinao ve fa mitaingina bisikileta toa antsika ny biby? Androany izahay mitondra ny andian-tsarety mitaingina biby tsapanay. Ilay Andriamatoa elk tsara tarehy, Andriamatoa rhinoceros Andriamatoa zirafy malemy fanahy, Miss alpaca ary gidro marani-tsaina dia eo amin'ny bisikileta taloha ihany no manao veloma anao. Inona no zavatra niainana mahafinaritra? Safidio ny vokatra amidy tsara indrindra amin'ny vanim-potoana!
Haingon-trano firavaka mpanao jono
Ny antony anolorana anarana an'i Beaver dia karazan-biby mpikiky biby goavam-be, an'ny biby semi anaty rano, monina any amin'ny ilantany avaratra amin'ny faritra mangatsiaka, dia afaka miaina ambanin'ny ranomandry. Karazana roa sisa no tavela eto amin'izao tontolo izao: ny iray dia ombivavy amerikana, zaraina any amin'ny faritra avaratr'i Etazonia, Canada ary Alaska, ary ny iray hafa dia ilay ombivavy monina any Eurasia, avaratr'i Azia ary Eropa. Androany dia mamporisika mpangalatra telo avy any Kanada izahay. Tian'izy rehetra ny mihinana trondro ary mahay manjono. The ...
Haingo mahatsapa ondry tsara tarehy
Antony fanolorana anarana Ny fianakavian'ondry mahatsapa vita tanana vita amin'ny volom-bolo nanahaka no vondrona malaza indrindra amin'ny andian'ondry volon'ondry rehetra ankehitriny. Raim-pianakaviana izy ireo, renim-pianakaviana, rahalahy ary rahavavy zanak'ondry. Keepsake an'ny fianakaviana dia lakolosy varahina. Ny rojo maitso ravina dia manampy Krismasy. Ny fianakaviana ondry mahafinaritra dia mendrika mividy trano ho fanomezana amin'ny fialantsasatra rehetra
Tantsambo alika mahatsikaiky isan-karazany
firavaka, Haingon-trano, Wall Art, Ornament Krismasy, Haingo, Haingo amin'ny rindrina,